पाँच वडाध्यक्षले दिए सामूहिक राजीनामा, विप्लवकाे त्रास या ‍‍‍...? - Everest Dainik - News from Nepal
पाँच वडाध्यक्षले दिए सामूहिक राजीनामा, विप्लवकाे त्रास या ‍‍‍…?
बाजुरा । जिल्लाकाे बडिमालिका नगरपालिकाका पाँच वडाध्यक्षले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् ।
नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरले मनोमानी रुपमा एकलौटी निर्णय गर्ने गरेको भन्दै बिहीबार ध्यानाकर्षणपत्रसहित पाँचै वडाध्यक्षले सामूहिक राजीनामा दिएका हुन् ।
नगर कार्यपालिकाको बैठकमै विकास समितिका सदस्य नरहने गरी सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)बाट चुनाव जितेका पाँच वडाध्यक्षले राजीनामा दिएका हुन् । वडा नं ७ का अध्यक्ष धर्मराज उपाध्यायका अनुसार विधिविपरित नगरप्रमुख र उपप्रमुखसहितले एकलौटी निर्णय गर्ने र पदीय जिम्मेवारी नै बेवास्ता गर्ने गरेकाले राजीनामा दिएको बताए । वडा नं ९ का अध्यक्ष विनोदकुमार विकले पनि सोही गुनासो गरेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस बाजुरामा पहिरोले सडक भाँसिदा यातायात ठप्प, ८ परिवारले घर छाडे
ट्याग्स: बाजुरा, राजिनामा